Chọrọ Ịchọpụta na Ịdị Mma nke Ebe Weebụ Gị? - Mma, gee ntị na ihe omume!
Oliver King, nke Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, kwuru na ọtụtụ ndị kwenyere na ịhapụ onwe ha na nchịkọta Google abụghị ihe dị mkpa, ma ọ bụghị ya. Kama nke ahụ, ọ ga-enye gị nchebe dịka onye nwe ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-elekọta webmaster. N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, agbalịwo m ọtụtụ ụzọ iji hụ na ogo na arụmọrụ zuru oke nke ebe nrụọrụ weebụ m. Ị ga-eburu n'uche mkpa ọpụpụ Nchọgharị Nchọgharị Add-ons, Ntinye site na ISP ma ọ bụ IP, yana Nwepụ site na kuki.
Nchọgharị Nchọgharị Tinye-na
N'ihi Google ka ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ma mepụta Nchọpụta Nchọgharị Google Analytics na-eme ka ọrụ anyị dị mfe. Ọ gaghị adị njọ ịsị na nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe na kachasị mfe ịmalite igbochi echiche nke gị na ihe ntinye dị na Google Analytics - find my super qld. Ị ga-aṅa ntị na nhọrọ ntanetịime dị na desktọọpụ na ihe nchọgharị ma ghara ịga na Internet Explorer. Na nke ahụ kwuru, enwere m ụfọdụ ebe ọ na-eji usoro a..Otu n'ime nsogbu ndị kachasị m bụ na tinye-ons; Achọrọ m ime ka ha nwee ike ịnakwere okporo ụzọ ala ma site na ngwaọrụ na desktọọpụ. Ruo ugbu a, enweghi m ike ime nke ahụ, ma ana m anwale ọtụtụ usoro. Ọzọkwa, ndị tinye-ons ga-ewepu gị site na nchịkọta Google Analytics n'ihi na ị na-agbalị ime mgbanwe dị ukwuu.
Ewepu site na ISP / IP
Iji wepu site na ISP ma ọ bụ IP, ị kwesịrị ịbanye n'ime akaụntụ Google Analytics ma pịa nhọrọ nhọrọ. N'ebe a, ị ga-ahọrọ akaụntụ ahụ site na nhọrọ ndọpụta ma pịa bọtịnụ nzacha. Hụ na i wepu faịlụ niile amaghi na amaghi na listi a; ma ọ bụghị, ị ga-enwe nsogbu ụfọdụ. Mee ka m kwuo ebe a na usoro a anaghị adị irè dịka usoro a dị n'elu; Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke webmasters ka na-eji ya eme ihe ma dị mfe ịrụ ọrụ. Ihe bara uru nke usoro a bụ na ị nwere ike wepu IP na ISPs site n'akụkụ ọ bụla nke ụwa, ọ dịghịkwa mkpa ịgbanwe na kọmputa nke aka gị ma ọ bụ laptọọpụ. Ọ na-emekwa ka ọ dịrị gị mfe nyocha aha ngalaba, hụ na ịzụ ahịa weebụ gị.
Gaa na kuki
Na nso nso a ka m kuki kuki nke ebe nrụọrụ weebụ m iji mepụta data dị mkpa n'ihi na ọ dị mkpa maka weebụsaịtị niile. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla na kọmpụta, na-enye ihe kachasị mma na nke kachasị mma. Google na-emelite usoro ya, okwu, na ọnọdụ ya iji jide n'aka na ha na-agbaso usoro nhazi ha dị elu nakwa dị ka ọ dị na Google Analytics. Ka m kwuo ebe a na ebe nrụọrụ weebụ m dị oke ọnụ, nke pụtara na ọ nweghị ọtụtụ subdomains ma dị mfe ịnweta site na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ kọmputa. M na-adịbeghị anya gbanwere UA-XXXX-Y na nchịkọta Google Analytics m ma rụpụta ezigbo ihe. Ugbu a enwere m obi ụtọ ịhụ na ọ na-eweta ọtụtụ okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ m na echiche niile sitere na ndị mmadụ mbụ, ọ bụghị ndị bots.